China Coin fekitori uye vagadziri | Kingtai
Mari yedu yekuyeuchidza yakanakisa zvisingaenzaniswi uye akakosha matiketi, anogona kuve chiyeuchidzo chinotyisa kubva parwendo, chiratidzo chinozivikanwa chekambani yako, musangano kana kirabhu, kana mubairo unoshuviwa.
Yedu Mari yekuyeuchidza yakasarudzika uye anokosha mateki, anogona kuva chiyeuchidzo chinotyisa kubva parwendo, chiratidzo chinozivikanwa chekambani yako, musangano kana kirabhu, kana mubairo unoshuviwa.
Our souvenir mari iri inokosha mumushandirapamwe unokurudzira nzvimbo yako nenzvimbo dzayo dzinonakidza uye zvakavanzika. Nekusvika paboka rakakura revanhu, vanogona kushanda senzira inoshanda yekushambadzira yakanangana nenharaunda nenzvimbo. Izvo zvinodikanwawo nevateresi sehuwandu hwesimba.
Kuwedzeredza sarudzo dzekuwedzera dzinogona zvakare kusanganisira kuwedzera kupenya nyoro enamel, chinamirwa pamapepa, kudhinda kwedhijitari, kupenda uye epoxy.
Isu tinogadzira iyo mari, zviratidzo kubva: iron, ndarira, chiwanikwa, 24k goridhe yakafukidzwa bimetallic.
Dzinorohwa mukupedzisa kweuchapupu, izvo zvinowedzera kunaka kwechigadzirwa uye kukwezva. Muganhu unogona kusungwa kana kutsetseka.
Production nguva: 10-15 mazuva ebhizinesi mushure mekubvumidzwa kwehunyanzvi.
Zvadaro: 2D pini bheji